Wararka Warshadaha dharka la isticmaalay 归档 - hissenglobal.com
Archives Category: Wararka Warshadaha dharka la isticmaalay
Wararka Warshadaha dharka la isticmaalay
Rajada Horumarineed ee Warshadaha Dharka La Isticmaalay
Posted on July 8, 2021 July 9, 2021 by Jose, Zagumi
Ugu horeyn,Taariikhda Ganacsiga Dharka la isticmaalo ee Shiinaha Dhoofinta dharka la isticmaalo ee Shiinaha ee loo dhoofiyo Afrika waxay soo bilaabatay 20 sano ka hor, hal ama laba shirkadood oo keliya ayaa ku yaal gobolka Guangdong. Tobanka sano ee soo socda, warshadaha dhoofinta ee dharka duugga ah ayaa si tartiib tartiib ah u horumaray. Dabadeed Abbaarihii 2010kii, ganacsiyo ku hawlan dhoofiyayaal dharka la isticmaalay ayaa kor u kacay. Xaaladda hadda jirta […]
Posted in Wararka Warshadaha dharka la isticmaalay	| Tagged dharka la isticmaalo ， dharka labaad ee gacanta	Leave a comment
Xaqiiqooyinka ugu sarreeya ee ku saabsan dharka Okrika ee gacanta Labaad ee iibka ah ma aadan ogeyn.
Posted on June 29, 2021 July 2, 2021 by Hissen Global Candy
Waa maxay Ganacsiga Okrika? Waa ganacsi fudud oo lagu iibiyo dharka gacan labaadka ah ee Nigeria. Iibiyeyaashu sidoo kale waxay isticmaalaan erayo kale si ay u qeexaan dharkooda Okrika, sida leexinta-hoos-doorashada, Belgium, tokunbo iyo iwm. Si kastaba ha ahaatee, dhammaan waa dhar la isticmaalay, sida suunka, kabaha, funaanadaha iyo wixii la mid ah. Qiimuhu wuxuu ku xiran yahay tayada iyo astaanta. Waa dhacdo ganacsi oo casri ah oo ilaalinaysa […]
Posted in Wararka Warshadaha dharka la isticmaalay	Leave a comment
Waa maxay qiimaha dhaqaale ee dharka la isticmaalay, kabaha la isticmaalay?
Dhaqaale ahaan dharka la isticmaalay, kabaha la isticmaalay waxaynu wada ognahay inay jirto odhaah caan ah oo odhanaysa "sida aad u labisan tahay ayaa laguula hadlayaa" waa sababta labbiskeenu uu muhiim u yahay oo uu si fiican inoogu soo saaro aduunka. sidaas darteed haddii aad rabto in lagugu tixgeliyo […]
Posted in Wararka Warshadaha dharka la isticmaalay	| Tagged dharka la isticmaalo, kabo la adeegsaday	Leave a comment
MAXAA KA DHIGAY "GANACSIGA OKRIKA" NIGERIA NOQDAY MEESHA CUSUB?
Posted on June 28, 2021 July 3, 2021 by Zagumi Connie
Dharka quruxda badan ee la isticmaalay Ragga sida Xayawaanka bulsheed waxay u baahnaayeen Saddexda Waxqabad ee Aasaasiga ah: Cunto, Dhar iyo Hoy. Isbeddelka Dharka la Isticmaalay Qof kasta oo ka ganacsanaya khadadkan waa hubaal inuu guulaysan doono, baahida had iyo jeer way ka miisaan badnaan doontaa sahayda. Qofkasta oo bini aadam ah waa in uu xidho dhar si kasta oo ay tahay xaalad bulsho iyo xaalad dhaqaale. Suuqa Dharka La Isticmaalay Kobcinta Suuqa Dharka la isticmaalo ee Afrika waa ganacsi kobcaya balaayiin doollar oo leh faa'iido sare oo soo saari karta. Coz ee […]
Xaalada Dharka La Isticmaalo Ee Dalka Maraykanka.
Posted on June 28, 2021 July 3, 2021 by [emailka waa la ilaaliyay]
Xoog weyn ayaa dib u qaabaynaya warshadaha moodada: dharka gacan labaadka ah. Sida lagu sheegay warbixin cusub, suuqa dharka labiska ee Maraykanka ayaa la saadaalinayaa inuu saddex laab ka badan doono qiimaha 10ka sano ee soo socda - laga bilaabo US $ 28 bilyan sanadka 2019 ilaa US $ 80 bilyan sanadka 2029 - suuqa Mareykanka ee hadda qiimihiisu yahay $ 379 bilyan. Sanadka 2019-ka, […]
SUUQA LABAAD EE GACMAHA NIGERIA
Suuqa labaad ee dharka gacma-gacan ee Nigeria ayaa ku fiday labaatankii sano ee la soo dhaafay magaalooyinka dalka oo dhan, oo ay ku jiraan Lagos, Ibadan, Enugu, ABA, Kano, Jos, Onitsha, Benin city, port Harcourt iyo kuwa kale. Waxa soo dhawaynaya dadka dakhligoodu hooseeyo iyo qayb ka mid ah dabaqadda dhexe oo sii yaraanaysa. Lagos oo ay ku nool yihiin 20 milyan ayaa si sahal ah u noqotay xarunta ugu weyn ee dharka gacan labaadka ah. Tiro suuq ah […]
Posted in Wararka Warshadaha dharka la isticmaalay	2 Comments
Sidee Faa'iido U Leedahay Dib-u-warshadaynta Dharka La Isticmaalay!
Posted on June 22, 2021 July 3, 2021 by Hissen Global Candy
Xagee ka yimaadaan dharka la isticmaalay? Dharka gacanta labaad ayaa dib loo warshadeeyay ama la isticmaalay ama dharka aan la rabin, waan hubaa inaad aragtay sanduuqa buluuga ah ee noocan oo kale ah. Waxa la dhigayaa gees kasta oo Shiinaha ah iyo waddo kasta. Dharka aanu ku deeqnay waxay ku qulqulayaan Afrika iyagoo dhex mara sanduuqan. Waxaa ka dambeeya goobta dib-u-warshadaynta dharka ee hore oo koontaroolaysa. Waxay sidoo kale ku daabacaan macluumaadka internetka oo ay iska ururiyaan dharka. Qaar ka mid ah dharkan duugga ah ayaa la geeyaa dukaamada daryeelka bulshada, qaarna waxaa laga sameeyaa agab dib loo warshadeeyay, hase ahaatee intooda badan waxaa loo qaadaa Afrika. Sidee bay lacag u samaysaa iyo sababta ay caan uga tahay Afrika? Kani waa wax kala iibsi/iibid/ganacsi is-dhaafsi ah oo u dhexeeya ganacsadaha iyo tafaariiqle. Dharka gacanta labaad maaha oo kaliya mid gaar ah oo moodada ah laakiin sidoo kale waa la awoodi karaa. Waligaa ma bixin doontid meel kasta oo kuugu dhow qiimo buuxa taasina waa mid ka mid ah sababaha aadka loogu talinayaa gaar ahaan Afrika. Inta badan gacanta labaad waxay ka timaadaa Shiinaha, Kanada, USA iyo UK waxaana loo soo raraa adduunka oo dhan inta badan Afrika oo suuqa macaamiishu ku badan yahay. Kahor dhoofinta, waxay u baahan yihiin in la nadiifiyo, […]
Qof Ku Noqday Milyaneer Kadib Soo Dejinta Dhar la isticmaalay Waa ayo kan ku xiga?
Posted on June 18, 2021 July 3, 2021 by Zagumi Connie
Soo-dejinta Dharka la Isticmaalay Marka la soo dejiyo dharka la isticmaalo ay aad caan uga noqdeen suuqyada Afrika, waxaa soo badanaya dadka doonaya in ay galaan warshadaha iibinta dharka la isticmaalay. Iibinta dharka gacan labaadka ah Dadka qaarkiis waxay noqdaan milyaneer maxalli ah iyagoo iibinaya Dharka la isticmaalay, dadku waxay u maleynayaan inay faa'iido badan tahay in la sameeyo Ganacsiga dharka la isticmaalay, soo jiidashada […]
Waa maxay sababta Shiinuhu u horseedayo habka labiska gacan labaad?
Shiinaha oo hogaaminaya dharka gacan labaadka ah Marka hore, xogtu waxay muujineysaa, celcelis ahaan, qof kasta oo Shiinaha ku nool wuxuu iibsadaa ilaa 10 dhar cusub sanad walba, kuwaas oo 3-5 xabbadood oo dhar ah la tuuray. Ku dhawaad ​​50 milyan oo tan oo dhar ah ayaa la tuuraa sanad walba, kuwaas oo inta badan dharka gacan labaadka ah ee la iska tuuro aan si dhib yar loo xidhin. […]
Posted in Wararka Warshadaha dharka la isticmaalay	| Tagged dharka gacanta labaad	Leave a comment
Talooyin ku saabsan samaynta lacag Afrika - Falanqaynta suuqa dharka-gacan labaad
Posted on June 16, 2021 July 3, 2021 by [emailka waa la ilaaliyay]
Waa maxay rajada laga qabo in dharka gacan labaadka ah laga helo suuqyada Afrika?Suuqyada Afrika oo aad u camiran iyo laamiyada magaalooyinka Afrika, dadka wax iibsanaya waxa ay qiimo jaban kaga iibsan karaan dharka casriga ah ee noocyada kala duwan ee caalamka. Xogta ayaa sheegeysa in Kenya oo kaliya ay soo dhoofsato ilaa 100,000 oo tan oo dhar-gacan ah sanad walba, kuwaas oo [...]
zoritoler imol on 5-ta ugu Sarreysa ee ugu Caansan Dharka Labaad ee Qubrus
Anonymous on 5-ta ugu Sarreysa ee ugu caansan Dharka Labaad ee Masar
Anonymous on 5-ta Warshadood ee ugu Sarreysa ee La Isticmaalo Jumlada Dharka ee Singapore
zoritoler imol on 5-ta ugu Sareysa ee Dharka Iibka ah ee la isticmaalo gudaha Nauru
amaah bixiyayaasha mortgage ugu fiican california on 5-ta Warshadood ee ugu Sarreysa ee La Isticmaalo Jumlada Dharka ee Singapore
Wararka Warshadaha Kabaha La Isticmaalay